द्वन्द्वको तनाव वा औपचारिक कानुनी प्रणालीको चिन्ताको साथ बाँच्नको विकल्पको रूपमा, मध्यस्थताले द्वन्द्वमा परेका मानिसहरूलाई चाँडो र सस्तोमा कामयोग्य समाधानहरू फेला पार्न मद्दत गर्दछ।
एक स्वैच्छिक र गोपनीय प्रक्रिया प्रयोग गरेर तटस्थ मध्यस्थहरूले द्वन्द्वमा रहेका पार्टीहरूलाई आपसी सन्तोषजनक सहमतिमा पुग्न मद्दत गर्छन्। मध्यस्थहरूले एक अर्कासँग कुराकानी गर्न पार्टीहरूलाई सहयोग गर्छन् र सबैलाई सहयोगी रूपमा समस्याको समाधानको लागि प्रोत्साहन गर्दछ जुन सबैको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ।
मध्यस्थता बिभिन्न विवादहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, सहित तर सीमित छैन:
परिवार (सम्बन्ध विच्छेद, प्यारेन्टिंग योजनाहरू, जेठा हेरचाह, र अभिभावक / किशोर मुद्दाहरू)
व्यवसाय / उपभोक्ता
घरमालिक / भाँडादार
मध्यस्थताको बारेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नु अघि, कृपया तालिका र FAQ लाई समीक्षा गर्नुहोस्।
मध्यस्थताका लागि फाइदाहरू
Win / Win समाधानहरू
आफ्नै समाधानहरू सिर्जना गर्नुहोस्
निजी र गोप्य
अदालत प्रणाली भन्दा धेरै छिटो
मुकदमेबाजी भन्दा कम महँगो
उच्च बस्ती दर
मध्यस्थताबाट के अपेक्षा गर्ने
मध्यस्थतामा तपाईंलाई राम्रो विश्वासमा भाग लिन भनियो। यसले अन्य पार्टीको कुरा सुन्ने, समाधानको बारेमा खुला मन राख्ने र जित्ने समाधानको लागि साँच्चै काम गर्ने समावेश गर्दछ। मध्यस्थताको समयमा गरिएका प्रस्तावहरूमा ग्राहकहरूलाई गम्भीरताका साथ विचार गर्न आग्रह गरिनेछ।
प्रक्रिया तपाइँलाई अन्य व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न र समस्या समाधानमा ध्यान केन्द्रित गर्न डिजाइन गरिएको हो। यो मध्यस्थहरु द्वारा एक परिचयात्मक बयान, तपाइँको प्रत्येक द्वारा निर्बाध बयान पछि पनी समावेश छ। यस कथनले तपाइँको मध्यस्थतामा ल्याएको कुरा र तपाइँ के भएको हेर्न चाहानुहुन्छ त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ। मध्यस्थकर्ताले मध्यस्थकर्ताहरूको बीचमा छलफल गर्नका लागि तपाईं दुबै वस्तुहरूको सूची सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईंलाई अन्य व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने अवसर दिइनेछ जबकि मध्यस्थहरू कुराकानीमा सुविधा पुर्‍याएर सहयोग पुर्‍याउँछन्। अन्तमा मध्यस्थहरूले कुनै पनि सम्झौताहरू लिखित रूपमा राख्नेछन् जुन तपाईं दुबैमा पुग्नुहुन्छ।
मेडिकेसनको लागि तयारी गर्दै
मध्यस्थता ग्राहकहरूको लागि यो तयार हुनु महत्त्वपूर्ण छ। कृपया मध्यस्थता भन्दा पहिले तपाइँको केस प्रबन्धकलाई एक सूचित निर्णय लिन मद्दतको लागि कुनै कागज ईमेल गर्न कृपया सम्झनुहोस्। यो एक मध्यस्थता तयारी वर्कशीट पूर्ण गर्न पनि सहयोगी हुन सक्छ। अनलाइन मध्यस्थताका साथ तपाईको मध्यस्थता भन्दा कम्तिमा दुई हप्ता अघि तपाईको केस प्रबन्धकलाई यी कागजातहरू प्रदान गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
न डीआरसी स्टाफले न मध्यस्थले कानुनी सल्लाह प्रदान गर्ने छ। यदि तपाईंलाई तपाईंको मध्यस्थता अघि कुनै वकिलको सहयोग आवश्यक छ भने, तपाईंलाई कुनै पनि बाहिरी जानकारी खोज्न प्रोत्साहित गरिन्छ तपाईंलाई सम्झौता गर्न मद्दत गर्न आवश्यक पर्दछ।
मध्यस्थताको तयारी गर्न सहयोग पुर्‍याउन हामीसँग धेरै जानकारीात्मक संसाधनहरू र वर्कशिटहरू छन्
मध्यस्थता तपाईंको लागि के गर्न सक्दछ?
जब तपाईं स्नोहोमिश काउन्टी (क्यासकेड, एभरेट, सदाबहार वा दक्षिण डिभिजन), टापु काउन्टी वा स्कागिट काउन्टीमा दावी फाइल गर्नुहुन्छ, अदालतमा तपाईंको पहिलो उपस्थितिको मध्यस्थता सत्रको लागि हुनेछ। तपाईंले विवाद समाधान केन्द्र सम्पर्क गर्नु अघि आवाश्यक पर्दैन। मध्यस्थहरू स्वचालित रूपमा अदालतमा तपाईंको मध्यस्थता सत्रको लागि प्रदान गरिनेछ।
यदि तपाइँको अदालतमा कागजपत्र वा अदालत प्रक्रिया पेश गर्ने बारेमा प्रश्नहरू छन् भने तपाइँले उपयुक्त जिल्ला अदालतमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ।
स्वयं सहायता सामग्रीका लागि
साना दाबी अदालतको बारेमा,
सानो दावी प्रक्रिया
तपाईंको सुनुवाइको दिन
न्यायाधीशले मध्यस्थता प्रक्रियाको बारेमा र यस प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा भाग लिन किन लाभदायक छ भन्ने बारेमा खुला टिप्पणी दिनेछ। न्यायाधीशले क्यालेन्डर मार्फत कल गर्ने छ र दुबै पक्ष त्यहाँ मुद्दा भएको ठाउँमा, ती मध्यस्थतामा पठाइनेछ।
मध्यस्थहरूले तपाईंलाई मध्यस्थता कोठामा लैजान्छन् जहाँ एक मध्यस्थले केही थप जानकारी दिन्छ जुन तपाईंलाई मध्यस्थता प्रक्रियाको अधिकतम बनाउन मद्दत गर्दछ। मध्यस्थहरूले तपाईंलाई चित्तबुझ्दो समाधान प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भनेर हेर्नको लागि तपाईंको केसमा कुरा गर्न मद्दत गर्दछ। सबै बस्ती कानूनी रूपमा बाध्यकारी हो र दुबै पक्षहरूको सुरक्षा गर्दछ। तपाईको केस मिलाउन कुनै जोखिम छैन। यदि कुनै पनि पक्षले करार भs्यो भने, अर्कोले न्यायाधीशको अगाडि मुद्दाको लागि अनुरोध गर्न सक्छ।
कसरी तयारी गर्ने?
मध्यस्थतामा सबै कागजातहरू ल्याउनुहोस् जुन तपाईं परीक्षणमा प्रस्तुत हुनुहुनेछ। यसले सबै पक्षहरूलाई परीक्षणमा प्रस्तुत गरिने आधारमा सूचित निर्णय गर्न अनुमति दिन्छ।
साक्षीहरूलाई मध्यस्थतामा आवश्यक छैन र मध्यस्थता बाहिर पर्खिन भनिन्छ। साक्षीहरू केवल मध्यस्थतामा भाग लिन्छन् यदि विवादमा सूचीबद्ध सबै पक्षहरू साक्षी सहभागी हुने कुरामा सहमत हुन्छन्।
मध्यस्थहरू तटस्थ तेस्रो पक्ष हो र कानुनी सल्लाह दिदैन वा तपाईंको केसलाई कसरी सुल्झाउने भनेर सिफारिस गर्दैन। तिनीहरू उच्च प्रशिक्षित छन् र प्रक्रिया मार्फत मार्गदर्शन गर्दछ जसले प्रत्येक पक्षलाई तपाईंको केस समाधान गर्नका लागि विचारहरू र विकल्पहरू साझा गर्न मौका दिनेछ। एक पटक आपसी सन्तोषजनक सहमति पुगेपछि मध्यस्थले तपाईंको सम्झौता लेख्नेछ जसले तपाईंको बस्तीको विवरण लिन्छ।
मध्यस्थता प्रक्रिया गोप्य छ। अनुरोधहरू र प्रस्तावहरू गोपनीयता द्वारा सुरक्षित छन्। एकचोटि तपाईले ट्रायल जानु भयो भने न्यायाधीशले मध्यस्थतामा गरिएको प्रस्ताव सुन्नेछैन। केसको समाधानका लागि प्रस्ताव बनाउँदा यसले तपाईंलाई सिर्जनात्मक र लचिलो बनाउन अनुमति दिन्छ।
तपाईको मध्यस्थताको दिनमा3सम्भावित परिणामहरू छन्।
तपाईं सम्झौतामा पुग्नुहुन्छ र क्लर्कसँग तपाईंको सम्झौता फाइल गर्नुहुन्छ। यो कुनै फैसला होईन।
यदि तपाईं मध्यस्थतामा राम्रोसँग मिलेर काम गर्दै हुनुहुन्छ तर तपाईंसँग त्यस दिनको व्यवस्थित गर्नको लागि आवश्यक जानकारीहरू छैन भने, तपाईं सँगै फिर्ता आउन र सम्झौताको लागि कार्य गर्न कुनै शुल्क बिना दोस्रो मध्यस्थता निर्धारित गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि, एक मध्यस्थसँग भेट गरेपछि, तपाईंलाई आफ्नो मुद्दा सुनुवाईको लागि न्यायाधीशको आवश्यकता छ भने, तपाईंले क्लर्कसँग परीक्षणको मिति तय गर्न सक्नुहुन्छ।
Skagit उपत्यका सेवाहरू
हामी विभिन्न अनलाइन सेवाहरूको विशेष रूपमा Skagit उपत्यकाको अद्वितीय प्रकृतिमा केन्द्रित प्रस्ताव गर्दछौं।
हामी कम लागत वाले प्यारेन्टिंग योजना, बिच्छेद, र सम्बन्ध विच्छेद अनलाइन मध्यस्थता सेवाहरूको साथसाथै अभिभावक र सह-अभिभावक कक्षाको साथ जीवन परिवर्तन गरिरहेका परिवारहरूको सेवा गर्दछौं। हाम्रो अभिभावक-किशोर सुविधाजनक कुराकानीहरू पारिवारिक सद्भाव र समझ बढावा दिनको लागि निःशुल्क प्रस्ताव गरिन्छ।
हाम्रो समुदाय मध्यस्थता केन्द्र व्यावसायिक विवाद, छिमेकी-देखि-छिमेकी संघर्ष, प्राकृतिक स्रोत संघर्ष, कार्यस्थल असहमति, र अधिकको समाधानको लागि एक स्रोत हो।
हामी ट्रस्ट, संचार, नेतृत्व, र अन्य विषयहरूमा कार्यस्थल प्रशिक्षण प्रदान गर्दछौं जसले स्वस्थ, उत्पादक कार्यबल उत्पादन गर्दछ।
द्वन्द्वको तनाव वा औपचारिक कानुनी प्रणालीको चिन्ताको साथ बाँच्नको विकल्पको रूपमा, मध्यस्थताले द्वन्द्वमा परेका मानिसहरूलाई चाँडो र सस्तोमा कामयोग्य समाधानहरू फेला पार्न मद्दत गर्दछ। एक स्वैच्छिक र गोपनीय प्रक्रिया प्रयोग गरेर तटस्थ मध्यस्थहरूले द्वन्द्वमा रहेका पार्टीहरूलाई आपसी सन्तोषजनक सहमतिमा पुग्न मद्दत गर्छन्। मध्यस्थहरूले एक अर्कासँग कुराकानी गर्न पार्टीहरूलाई सहयोग गर्छन् र सबैलाई सहयोगी रूपमा समस्याको समाधानको लागि प्रोत्साहन गर्दछ जुन सबैको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ। मध्यस्थता बिभिन्न विवादहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, सहित तर सीमित छैन:
परिवार: जस्तै तलाक, प्यारेन्टिंग योजना, एल्डरको हेरचाह र अभिभावक / किशोर मुद्दाहरू
Skagit घाटी अनलाइन मध्यस्थता
Skagit घाटी सानो दावी मध्यस्थता
स्कागीट काउन्टी भित्र प्राय जसो साना दाबीहरू मुद्दा चलाउन अघि मध्यस्थतामा जानु पर्छ। स्कागिट काउन्टी जिल्ला अदालत वेबसाइटमा गएर थप जान्नुहोस्।
हामी द्वन्द्व प्रबन्धन क्षेत्रमा तीस बर्ष भन्दा बढीको अनुभवको साथ सिर्जना र विकास गरिएको उच्चतम क्यालिबरको व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान गर्दछौं। हाम्रा प्रशिक्षकहरूले कौशलता र अन्तरदृष्टिको एक विशाल चौडाई प्रदर्शन गर्छन् र सहभागीहरूका लागि विभिन्न व्याख्यान, छलफल र अभ्यास सत्रहरू प्रदान गर्न अन्तर्क्रियात्मक निर्देशन प्रयोग गर्छन्। हामी व्यक्तिगत प्रशिक्षणमा विभिन्न प्रकारको प्रस्ताव गर्दछौं:
आधारभूत मध्यस्थता प्रशिक्षण
अनुकूलन योग्य प्रशिक्षण
हामी निम्न एक दिन व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण प्रदान गर्दछौं।
कार्यस्थलमा द्वन्द्वको समाधान
कार्यस्थलमा भरोसा राख्नुहोस्
प्रभावी नेताहरूको लागि सञ्चार कौशल
बहुमूल्य जीवन कौशल सिक्नको साथसाथै, धेरै विद्यार्थीहरूले निरन्तर शिक्षा क्रेडिटहरू, घण्टौं घण्टा र कलेज क्रेडिटहरू प्राप्त गर्दछ जुन हाम्रो प्रशिक्षणहरू पूरा गर्नका लागि छन्। निरन्तर कानूनी शिक्षा क्रेडिटहरू वाशिंगटन राज्य बार एसोसिएसन मार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ र अन्य क्रेडिटहरू तपाइँको व्यावसायिक संगठन मार्फत उपलब्ध हुन सक्छ।
हामी स्कूल प्रशासकहरु, शिक्षकहरु र विद्यार्थीहरुलाई बिभिन्न प्रशिक्षण प्रदान गर्दछौं। प्रशिक्षणमा स्टाफ र विद्यार्थीहरूको लागि द्वन्द्व समाधान कौशलका साथै विद्यार्थीहरूका लागि सहि मध्यस्थता प्रशिक्षण समावेश हुन्छ। तपाईंको स्कूलको लागि काम गर्ने प्रशिक्षणलाई अनुकूलित गर्न हामीलाई स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्।
यो अनलाइन सह-अभिभावक वर्गले आमाबुवाहरूलाई सम्बन्धविच्छेदको साथ जाँदा सहायता गर्दछ, जसले उनीहरूको परिवारको गतिशीलता र सम्बन्ध परिवर्तन गर्न खोजी गर्दछ, जबकि बच्चाको आवश्यकतामा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। यस कक्षामा तपाईले सिक्नुहुनेछ:
सम्बन्धविच्छेदको समयमा कसरी आफ्ना बच्चाहरूलाई मद्दत गर्ने।
बच्चाहरूमा अभिभावकको द्वन्द्वको प्रभाव।
कसरी सह-अभिभावकलाई प्रभावी रूपमा बच्चाहरू समायोजन गर्न मद्दत गर्न।
कसरी प्यारेन्टिंग सीपहरू र सह-अभिभावकीय दक्षताहरू सुधार गर्ने।
शोक र रिस कसरी बुझ्ने।
अनुरोध प्रशिक्षण प्रशिक्षण
सहयोग चाहियो? १-K००-२80-4-770० मा स्काईगिट भ्याली DRC कल गर्नुहोस्
परिवार मध्यस्थता अनुप्रयोग
सादा भाषा अभिभावक योजना फारम
मध्यस्थता गर्न सम्झौता
शुल्क छुट अनुप्रयोग
तालिका मध्यस्थता र प्रायः सोधिने प्रश्नहरू
मध्यस्थता तयारी वर्कशीट
सम्पत्ति र idingण विभाजनको लागि वर्कशीट
कार्यस्थल द्वन्द्व समाधानका लागि १० सुझावहरू